के गर्दैछन् गुप्तचर निकायका प्रमुख ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लथालिंग
प्रकाशित मिति २० बैशाख २०७५, बिहीबार १५:५० लेखक नेपालीजनता
जवकी भारतको गुप्तचरी निकाय ‘रअ’ देश विदेशमा निकै सक्रिय रहँदै आएको छ । भारतमा ‘रअ’ ले दिएको सूचनालाइ सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्दछ । तर, नेपालमा भने राअबी सूचना विहिन हुँदै गएपछि विघटनको अवस्थामा पुगेको छ ।
काठमाडौं । कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनले चार वर्षका लागि कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ । यस आधारमा १४ औँ महाधिवेशन…
व्यवस्थित हुँदै दिक्तेल बजार
खोटाङ । फोहोर, जथाभावी पार्किङ र सडक पेटीमा थुपारिएका निर्माण सामग्रीले अस्तव्यस्त देखिने दिक्तेल बजार पछिल्लो समय व्यवस्थित गर्न…
पशुपतिनाथमा चन्दन: अम्बाको काठदेखि श्रीखण्डसम्म
काठमाडौं । पशुपतिनाथमा श्रीखण्ड बाहेक अम्बा, धुपी, पारिजात, कपुर र भीमसेनपातीको डाँठ घोटेर पनि चन्दन बनाइन्छ। यो चन्दन बिक्री…
सभामुखबाटै बलात्कृत भएँ भन्दै सांसदलाई फोन !
काठमाडौं । सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारकाे आरोप लगाएकी संसदकी कर्मचारीले ‘घटना’ भएलगतै आइतबार राति नै सांसदहरुलाई फोन गरेर सहयोग मागेको…